उकालो लाग्दै सुनचाँदीको मूल्य, कति पुग्यो आज ? – Deshko News
Home » आर्थिक » उकालो लाग्दै सुनचाँदीको मूल्य, कति पुग्यो आज ?
उकालो लाग्दै सुनचाँदीको मूल्य, कति पुग्यो आज ?
बजारमा सुनचाँदीको मूल्य हिजोदेखि फेरि उकालो लाग्न थालेको छ । आज सुन तोलामा थप दुई सय रुपैयाँ बढ्दै प्रतितोला ५८ हजार आठ सय रुपैयाँ पुगेको छ । हिजो सुन प्रतितोला ५८ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा पाँच रुपैयाँ बढ्दै प्रतितोला सात सय ५५ रुपैयाँमा पुगेको छ । हिजो चाँदी सात सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । चाँदीको मूल्य पनि दुई दिनदेखि बढ्दै गएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
महिनाको अन्तिम दिन सुनचाँदीको मूल्य घट्यो कि बढ्यो ? हेर्नुहोस्
किसानले आँपको मूल्य पाएनन्, कौडीको मूल्यमा विक्री
सुनचाँदीको मूल्य थप घट्यो, यस्तो छ आजको भाउ
ट्यांकरमा लक सिस्टम लागू
उर्लाबारीको बजेट ६१ करोड ७४ लाख बढी
सुनचाँदीको मूल्य कति छ आज ? हेर्नुहोस्